Maungtintyin: ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်း
ဘာသာတရားဟာ ရည်မှန်းချက်အနက်အဓိပ္ပါယ်ရဲ့ ကြောင်းကျိုးယုတ္တိဆိုင်ရာအသိ တစ်ခုကိုပေးဖို့နဲ့ - အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘယ်သူဆိုတာ ဘာရယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်အတူ အကျွန်ုပ်တို့ကို စီစဉ်ပြဌာန်းပေးလျှက်- လူသားဘ၀ ဦးတည်ရည်မှန်းချက်ကို ပေးဖို့ ကြိုးပမ်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ဦးချင်းအလိုက်- လင်မယားများ- မိသားစုဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များ- လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံသား လူမျိုးများဖြစ်သည့်အလျောက်- အကျွန်ုပ်တို့လူသားဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရဲ့ ခြားနားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်- ဆွဲထုတ်လို့မရနိုင်အောင် ဘာသာတရားက ဆက်နွှယ်ပတ်သက်ပါတယ်။
ဒါဟာ အဲဒီရဲ့နေရာအသီးသီးနဲ့ တန်ဖိုးအသီးသီးရှိတဲ့ အကျွန်ုပ်တို့လူသားဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ စိတ်ဖြာလေ့လာချက်ကတော့ ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အဆက်ဖြတ်ပထားခြင်း၊ မျက်စိလည်လမ်းပျောက်နေခြင်းရဲ့ ပြဿနာများစွာဟာ- လူသားဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ယဉ်ကျေးမှုအစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးနစ်နာခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။
လူသားဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရဲ့ ဒီအ၀န်းအ၀ိုင်းဟာ - မိသားစုကဲ့သို့ သေးငယ်တဲ့ နယ်ပယ်များမှ - အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံများကဲ့သို့ ကြီးမားကျယ်ပျံ့မှုမှတဆင့်- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူသားရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းမှာ လူသားအားလုံး တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့ ကျယ်ဝန်းတဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းကို နောက်ဆုံး ထွေးပိုက်ဖို့- အပြင်ဘက်သို့ တစ်လိပ်လိပ်ရစ်တက်သင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီသေးငယ်တဲ့နယ်ပယ်များက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည့်အနေဖြင့် သဘောပေါက်တဲ့အခါ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာများ ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ ခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ် သဘောပေါက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအစိတ်အပိုင်းကို ကာကွယ်ဖို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တသီးတသန့်နေလျှက်- သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်ကို အခြားသူများမှ ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေအောက်မှာ ဘာသာတရားကလည်း အဲဒီ ထီးတည်းနေခြင်းရဲ့ အဓိကအချက် ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမှာတောင် ပြီးတော့ အဲဒါကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေခြင်းရဲ့ အဓိကအချက် ဖြစ်လာပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုများနှင့် အခြားသူများမှ သူတို့ကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားတဲ့ သံသယဒွိဟများမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို လွန်မြောက်စေရန်- အကျွန်ုပ်တုိ့ဟာ သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကိုသာ ပြောဆိုရမည်မဟုတ်။ အခြားသူများမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အဆက်ဖြတ်ပထားတဲ့ သံသယနှင့် ရန်လိုစိတ်ရဲ့ အတားအဆီးများကို ထပ်ထည့်ထားတဲ့ - မှားယွင်းစွာ တင်ပြမှုများ- တစ်ယူသန်အမှုအကျင့်များနှင့် ပုံသေကားကျ သမာရိုးကျ ပုံစံများကိုလည်း တိုက်ဖျက်ချေမှုန်းရပါ့မယ်။
ဘာသာတရားဟာ လူသားဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအားလုံးနှင့် လေးလေးနက်နက် ဆက်နွှယ်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် - ဘာသာတရားအချင်းချင်းအကြား နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက ရမ်းဆ၍ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အဟန့်အတားများကို ချိုးဖျက်ခြင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်- အပြန်အလှန် လေးစားမှု, ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းအတွက် အရေးပါလှပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဘုံအနာဂတ်အတွက် အားဖြည့်တည်တံ့စေတဲ့ သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် ဂေဟစနစ်ကို သေချာအောင်ပြုလုပ်ဖို့ - တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ ရိုသေလေးစားဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်က - အားလုံးကို အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့် အသည်းအသန် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘာသာတရားဟာ အကျွန်ုပ်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း, ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း, ဓလေ့စရိုက် စသည့် သီးခြားလက္ခဏာတို့အတွက် ဗဟိုအချက်အချာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရှေ့အနောက် ဘာသာတရား အချင်းချင်းအကြား သဘောပေါက်နားလည်မှုဟာ ဒီအရေးပါမှုအတွက် မူလပဓာန ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနယ်ပယ်မှာ ထိရောက်တဲ့ အံကိုက်လှုပ်ရှားလည်ပတ်ခြင်းအတွက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘာသာရေးနှင့် ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကို လေ့လာစူးစမ်းတဲ့ အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ အစဉ်အလာအားလုံးဟာ တိကျတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစကားစပ်မှာ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမှန်တရား, ဒိဋ္ဌဖြစ်ရပ် ဒါမှမဟုတ် ဘုရားသခင် (သို့) နတ်များရှိနေခြင်း, အာရုံကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခြင်းက တစ်ခုခုသော ဓလေ့ထုံးစံ အစဉ်အလာထက် ကြီးကျယ်ပါတယ်။ ဒီအလိုအရ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အခြားသူများရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အတွင်းသဘောညဏ်အတွက် ဖွင့်ပေးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘာသာအချင်းချင်းအကြား စကားပြောဆိုခြင်းအတွက် နယ်ပယ်ဥပဒေ သုံးခုရဲ့နောက် အကျွန်ုပ်တို့ လိုက်ပါတယ်ဆိုတာ ဆွိဒင်နိုင်ငံသား Lutheran Bishoop Krister Stendahlက ထောက်ခံထားပါတယ်။
ပထမ! အဲဒီဘောင်အတွင်းမှ အကောင်းဆုံးနှင့်အညီ အခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းကို အမြဲတမ်း ရှုမြင်ပါ။
ဒုတိယ! သူတို့ကိုယ်သူတို့ နားလည်သဘောပေါက်တဲ့အတိုင်း အခြားသူများကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ကြိုးပမ်းပါ။
ပြီးတော့ နောက်ဆုံးက ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သန့်စင်မွန်မြတ်သော မနာလို မရှုဆိတ်မှုအခန်းမှ ထွက်ခွါပါ။
ဒါဟာ မိမိရဲ့ဓလေ့ထုံးစံအစဉ်အလာအတွက် သစ္စာမဲ့တဲ့ အပြုအမူတော့မဟုတ်။ သီးသန့်အထူးတလည်ဖြစ်တဲ့ လှပခြင်းဆိုင်ရာ တစ်စုံတစ်ခုကို တွေ့မြင်နိုင်စွမ်းနဲ့- အခြားသူများမှာ အတွင်းသဘောညဏ်ကို တွေ့မြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့အနောက် ဘာသာရေးအချင်းချင်းအကြား ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းက အရှေ့အနောက် ခြားနားတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံအစဉ်အလာဆိုင်ရာ အလှတရားနဲ့အသိပညာအတွက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းအပေါ် ဆုံမှတ်ထားရှိရပါ့မယ်။ သို့ဖြစ်၍ အစည်းအဝေးများမှ တဆင့်ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် အများသိနိုင်ရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းများမှတဆင့်ဖြစ်စေ ရွေးချယ်စီစဉ်ထားတဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဟာ- အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်နှင့် အကျိုးပြုတည်တံ့စေသောအနာဂတ်အတွက် အရေးပါခြင်းရဲ့ ဘာသာရပ်များနဲ့ အကြောင်းကိစ္စများအပေါ် - အခြားဓလေ့ထုံးစံအစဉ်အလာများမှ ထိုးထွင်းသိမြင်ညဏ်ဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ပိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အသိကြွယ်ဝစေ သိမြင်ရှင်းလင်းစေရပါ့မယ်။
ဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့အားလုံးက ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခု (လူသားအားလုံးနှင့် ဂြိုလ်နက္ခတ် တာရာများရဲ့ သာယာကောင်းမွန်မှုအတွက် အရင်းခံအခြေတည်တဲ့ အကျွန်ုပ်တို့ စုပေါင်းစုဆောင်းထားတဲ့ အသိပညာအတွက် အဖိုးတန်အရေးပါတဲ့ ဖြည့်ဆည်း ပံ့ပို့ပေးသူအားလုံး) ရဲ့ ခြေလက်အင်္ဂါအားလုံးလိုလိုချည်းသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ဒိဌဖြစ်ရပ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အကျွန်ုပ်တို့ တွေးဆ သတိမူလာနိုင်စွမ်း ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, June 27, 2011